Raw Methasteron (Superdrol) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Methasteron (Superdrol) budo, oo sidoo kale loo yaqaan Superdrol ama methyldrostanolone waa mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan ee firfircoon ee anabolic-androgenic steroid (AAS).
Budada Mastasteron (Superdrol) waa maadada anabolic anabolic. Ujeeddooyinka jirka / ujeedooyinka ciyaaraha Raw Methasteron (Superdrol) waxay kordhisaa heerarka testosterone taasoo keenta koror ballaaran oo ku yimaada qaabka jidhka iyo cabbirka, taaso badanaa waxay sabab u tahay awoodda ay ku kordhin karto tirada muruqyada muruqyada.
Qalab Methasteron (Superdrol) budo (3381-88-2) video
Faa'iidooyinkaas oo keliya ayaa Methasteron ka dhigaya a iyorrogen adag, laakiin sidoo kale waxa uu ka koobanyahay waxyaabo kale oo dhaqameedka steroid ah sida: kororka unugyada dhiigga cas (RBC); adkeysiga hagaajinta inta lagu jiro jimicsiga iyada oo loo marayo nadiifinta lactic acid; oodinimo dheellitiran iyo nafaqo-qaadis si kor loogu qaado muruqyada shaqeynaya si ay u noqoto mid xooggan; dib u hagaajin muruqa glycoge ka dib jimicsi si degdeg ah u soo kabashada iyo; xakamaynta habdhismeedka (baabi'inta murqaha).
Kalluunka Mastareerka ah ee loo yaqaan 'Methasteron' ayaa ah stabdhabka anabolic kaas oo ka dhigaya waxoogaa taariikh taariikheed gaar ah marka la barbardhigo steroids badanaa. Noocyada budada ah ee Superdrol waa kaliya calaamad muujinaysa steroid anabolic steroid oo iibisa hormoon ama hormar nafaqo oo ay bixiso Anabolic Extreme.
Xashiishka Methasteron (Superdrol) budada (3381-88-2) Smamnuucista
Product Name Mashiinka Mastasteron (Superdrol)
Magaca Kiimikada 2, 17-Dimethyldihydrotestosterone; 17-hydroxy-2, 17-dimethylandrostan-3-mid
Molecular Wsideed 318.49
barafku Psaliid 223-225 ℃
karisaaning Psaliid 423.8 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life saacadood 8-12
Mashiinka Mastasteron (Superdrol) ApDiyaarin Dhismaha jirka
Waa maxay budada Mastasteron (Superdrol) (3381-88-2)?
Sidee budada methasteron (Superdrol) budada (3381-88-2) shuqullada
Mashiinka Mastasteron (Superdrol) budada (3381-88-2)
Marka aynu ka hadleyno qiyaasta Superdrol, waa inaan maskaxda ku hayno in yoolalka jirka ka duwan yahay qof ka qof. Iyadoo qofku rabi karo in uu kiciyo, ujeedada kale waa laga gooyaa. Dhammaanba dhammaan qiyaasta Superdrol ee 20-30mg qiyaastii afar illaa lix toddobaad ayaa ku filan inay ku siiyaan natiijooyinka hadafka ah adiga oo aan khatar gelin caafimaadkaaga.
Inta badan isticmaaleyaasha Superdrol waxay yiraahdaan ka hor intaadan dooranin qiyaasta "Superdrol", waa inaad haysataa dheelitirka saxda ah ee muruqyada muruqyada iyo saameynta daawada. Waxaad tagi kartaa ilaa 40mg haddii aad rabto. Qaadashadan, waxaad ku guuleysan doontaa muruqyo badan iyo guulo xoog leh adigoon iloobin saamaynta saamiga Superdrol. Uma qalanto.
Dheefaha Mastasteron (Superdrol) budada (3381-88-2)
Haddii aad ka fekereysey inaad daadisid miisaanka dheeraadka ah, markaas Superdrol waa inuu marka hore maskaxdaada yimaadaa. Haddii aad isku dayday diirinta, tababarka ama labadaba, waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inaad u baahan tahay wax dheeraad ah. Nasiib wanaag, Superdrol waxay kaa caawineysaa inaad yareyso miisaanka si waxtar leh. Waa mid ka mid ah alaabooyinka lagu kalsoonaan karo.
Saameynta sumcada Superdrol waa mid aad ufiican marka aad go'aansato inaad iibsato budada Superdrol, marna ma fiirin kartid. Waxaan si kalsooni leh u odhan lahaa haddii aad isku celcelisid ama aanad lahayn murqo, steroidskaan ayaa kaa caawin doonta inaad dhisato jirdhis muruqa ah oo caan ah oo aad udoonayso.
Sida lagu xusay saameyntii hore ee Superdrol saamayntu waxay ka dhalatay dheellitir dheellitir oo dheellitir ah iyo xajinta nitrogen. Labaduba waxay ku sii kordhayaan wareega, taasina waa sababta keentay guulaha jirka ee Superdrol wuxuu ku siin doonaa mushahar labadaba inta lagu jiro jimicsiga iyo goobta shaqada. Iyadoo maskaxda lagu hayo, ma sii wadi doontid sababta muruqyadaada ay u soo jiidanayaan maalinta soo jiidashada badan.
Soo iibso Methasteron (Superdrol) budada Buyaas.com